अण्डा खाएपछि भुलेर यि ४ चिज नखानुहाेस नत्र हुनसक्छ गम्भिर असर! – Eps Sathi
January 5, 2022 482
हामिले प्राय सबै खानेकुराहरु एकै ठाँउमा मिसाएर खाने गर्छाै। किनकी कुनै चिज एकैसाथ मिसाएर खादा निकै स्वादिष्ट हुने गर्दछ। तर कुनै चिज एस्ताे पनि हुन्छ जुन एक आपसमा मिसाएर खानु हुदैन। मिसाएर खाएमा शरिरमा निकै गम्भिर असर पर्न सक्छ र स्वास्थमा गम्भिर समस्या देखा पर्छ। आज हामि तपाइले खाने-पिउने यस्ता केहि चिजहरुकाे बारेमा कुरा गर्दैछाै जुन सँगै खानु हुदैन। जस्ताे कि तपाईले दहीसँग कहिले पनि खट्टा खानु हुदैन।
यि चिज सँगै खादा कहिले पनि पच्दैन जस्काे कारण पेट गडबड हुन सक्छ। दहि त्यसै पनि चिसाे हुने हुदा यस्लाई कुनै पनि ताताे चिजसँग खानु हुदैन। जस्तो कि, तपाईंले दहीसँग कहिल्यै पनि खट्टा खानुहुँदैन। यि चिज सँगै खाँदा पच्दैन जसको कारण पेट गडबढ हुन्छ। यस दहीले चिसो हुन्छ, त्यसैले यसलाई तातो कुनै पनि चिजसँग खानु हुँदैन। जस्तै धेरै मानिसहरु दहीसँग माछा खाने गर्दछन तर त्यसो गर्नु हुँदैन किनभने माछाले तातो बनाउँदछ। आयुर्वेदका अनुसार कुखुरा र खजुर कहिले पनि सँगै खान हुँदैन।
जस्तो तपाईलाई थाहा होला दूध एक जनावरको प्रोटिन हो, फ्राइड गरिएको भुटेको खाना खानाले यसले प्रतिकृया देखाउन थाल्दछ। त्यस्तै अण्डाको बारेमा कुरा गरौं। अण्डामा पाइने प्रोटिनहरुले तपाईंलाई उर्जा दिन्छ। हड्डीहरुलाई सुदृढ पार्दछ र आँखाहरुलाई पनि स्वस्थ बनाउँदछ। भरपुर पौष्टिक तत्व समावेश भएकै कारण अण्डालाई पौष्टिक आहारको श्रेणीमा राखिन्छ।
अण्डा खाँदा विभिन्न फाइदा त मिल्दछ नै तर यदि तपाई दैनिक रुपमा उसिनेको अण्डा खानुहुन्छ भने केहि कुराको ख्याल राख्न अत्यन्त जरुरी छ। आज हामी तपाईलाई यस्तै चिजको बारेमा बताउँदछौं जुन अण्डा खाएपछि भुलेर पनि खानु हुँदैन। कागती : कतिपय मानिस जो अण्डा खान मन पराउँदछन उनिहरु अण्डामा कागतीको रस हालेर खान्छन ताकि यसको स्वाद राम्रो होस। तर कहिल्यै यसो गर्नु हुँदैन। किनभने त्यसो गर्दा रक्तनलीहरुलाई हानी हुन्छ र हृदयघातको खतरा पनि हुन्छ।
केरा : त्यस्तै यो कुराको पनि ख्याल राख्नुहोस कि अण्डा खाएपछि केरा कहिल्यै पनि खानु हुँदैन। अन्यथा यसले पेटसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरु निम्त्याउन सक्दछ। त्यसैले अण्डा खाएपछि केरा भुलेर पनि नखानुहोला। पनिर : पनिर र अण्डा वा अण्डा खाए लगत्तै पनिर कहिले पनि खानु हुँदैन। किनभने अण्डा र पनिर दुबैमा प्रशस्त प्रोटिन पाइन्छ। यदि हामीले धेरै प्रोटिन खपत गर्यौ भने त्यसलाई पचाउन गाह्रो पर्दछ। जसको कारण पेटसम्बन्धि धेरै समस्याहरु देखा पर्न सक्दछन। त्यसैले अण्डा खाएपछि पनिर खानुहुँदैन।
Prevकोरियामा एकपटक स्वाद लिनैपर्ने कोरियन खानाहरु, हेरौं केके छन?
Nextबाटोमा हिँडेकी कोरियन युवतिलाई यौ’न दु’र्व्यबहार गरेको आरोपमा कोरियामा एक नेपाली पक्राउ